Tontolon’ny fanontana boky :: Misy tsy firindrana eo amin’ny mpanoratra sy ny trano mpamokatra • AoRaha
Misy rafitra sy lamina ary ambaratonga andalovana vao tonga eny am-pelan-tanan’ ny mpamaky ny boky iray. Tsy mbola voahaja anefa ny rohy famorakam-boky eto amintsika, raha ny nambaran’i Michèle Rakotoson, mpanoratra sady lehiben’ny vovonam-pirenen’ny mpanoratra, mpanonta boky ary ny mpivaro-boky (Synael). Nohazavainy fa ny mpanoratra indray no mitady ny trano mpamokatra raha tokony hifanohitra amin’izay no izy.
“Manodidina ny 10%-n’ny vola azo avy amin’ny boky atonta sisa no anjaran’ ny mpanoratra vokatr’io endrika tsy firindrana io. Manosika ny mpanoratra tsy hanaraka ny rohim-boky io tranga io ka mampiditra azy hanao famoaham-boky avy amin’ ny herin’ny tenany ihany na “auto édition”. Tsy mora anefa ny hoe sady mpanoratra no miandraikitra ny famoahana ny boky ho antsika”, hoy
i Michèle Rakotoson.
Misy fiantraikany eo amin’ny tontolon’ny boky iray manontolo ireo rehetra ireo, hoy indray i Riso Lalason, poeta sady mpanoratra tantara. Isan’izany ny boky, tokony hivoaka kanefa tsy tafavoaka. Eo koa ny fiakaran’ny vidin’ny akora fanaovana boky, izay misy ifandraisany amin’ny mpamatsy sy ny toerana fivarotam-boky, araka ny fanamarihana nataony.
Tsy misy fifanoherana ny rohy famokarana boky eto amintsika, hoy kosa i Njaka Raonison, talen’ny tranom-bokim-pirenena. “Tranga fahita eran-tany ny hoe ny mpanoratra ihany no misahana ny famoahana ny asa sorany. Ny fizaràna andraikitra ao anatin’io sehatra io no mila hazavaina, toy ny hoe anjaran’ny editora no mampi- roborobo sy mampahafantatra ny sanganasan’ny mpanoratra miara-miasa aminy”, raha ny fanazavan’i Njaka Raonison.
Notsipihany fa lesoka hatramin’izay ny tsy fisian’ ny rafitra ametrahana any amin’ny fanjakana ny sora-pirintin’ny boky mivoaka. “Fototra ahafahana manampy sy manara-maso ny tontolon’ ny boky io rafitra io. An-dalam- panganana izany izahay ankehitriny. Efa misy koa ny paikady samihafa enti-miatrika ny olan’ny boky, toy ny hetsika boky manatona mpamaky”,
Amin’ny ankapobeny, miainga eo amin’ny mpanoratra, mandalo ny trano mpamokatra, miditra eo amin’ny fanontana sy fanalana diso, miroso amin’ny fanapariahana ary miafara eny amin’ny trano fivarotam-boky ny asa soratra izay vao afaka vidian’ny mpanjifa.
Tontolon’ny sarimihetsika :: Feno lesoka ny fampanarahan-dalàna ny politika nasionalin’ny sinema malagasy